5 Best Attractions For Kids In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Attractions For Kids In Europe
Vatariri nevana vanogona kana kuva rwaityisa kana yakanaka nguva muupenyu hwako. Nemhaka vedu 'yakawandirwa hunhu uye chido chedu wekuti navo, hapana kazhinji hapana pakati ivhu. zvisinei, pane nzira here kuti kufamba nevana nyore pachako. Nzira yakanakisisa kuzviita kuti tibu- vechiduku nguva dzose ave chinhu kuita kana kuona. Kuti abatsire muvadzivirire inogarwa, isu takanyora rondedzero ye 5 yakanakisisa zvinokwezva nokuti vana Europe. Unogona kusvika dzokugara izvi nyore nechitima. Ngatidyei Ngatitarise:
Attractions nokuti Kids kuItaly
Italy inopa zvishoma zvinoyemurika zvinokwezva zvevana kana vasangana ne nenhoroondo zvinotyisa hakurevi fadza navo. mu Viserba yokufaranuka Park, vanogona kutoona kweItaly muchidimbu! The paka zvakare ine fara-enda-denderedzwa, nhandare, siyana Vatasvi, uye sinema. Nerumwe, kana ukaona pakati Rome, unogona kuenda Hydromania mvura Park. Just kunze kuRoma, yadzinovimbisa vazhinji masiraidhi uye mvura mafaro, izvo zvinoita wakakwana nokuda vana.
Attractions nokuti Kids mu England
Mumwe mukuru zvinokwezva kuti vana muEngland ndiye Warner Bros. Studios Kuita kuti Harry Potter rwokuparidza mu London. zvisinei, nokuti vaduku vatsvakurudzi kuziva zvinoshamisa muzvarirwo, London kwakaita Natural History miziyamu ane sarudzo huru. Kune zvakawanda mbudzana-ushamwari Exhibits apo vanogona kudzidza pamusoro dinosaurs uye renzou. Chinhu chikuru ruzivo zvinoita London akakosha kushanyira nekuda mhuri.
Attractions nokuti Kids muNetherlands
Amsterdam Kazhinji hakusi kurumbidzwa semhuri-ushamwari rwendo, asi hazvirevi hazvigoneki kuti nzira. For vana, zvichida kunakidza nzvimbo iri Natura Artis Magistra kana Artists. Zviri zoo hombe rakazara ne aquarium, nhandare, Zoological Museum, uye chiumbwa chomufananidzo wenyika. Mupepa zvinopfuura 900 mhuka marudzi!
Nerumwe, unogona musoro Efteling muna Kaatsheuvel. Ndiyo hombe theme paki Munyika, aine kufungidzira dingindira uye Kusimbisa rengano. Kune Vatasvi zhinji uye varaidzo kuti vana vari kwazvo rengano.
Panyaya yevaraidzo kuvana, Bherujiyamu anopa kwayo dingindira Park, Plopsaland. Hazvina mavara, azere chinotenderera Coasters uye nhandare, uye ane zvakasiyana-siyana dzinotaura kuti mwana wose vanakidzwe. Iyo zvakare ine purazi ine mhuka dzinogona kushanyirwa nevana, uyewo yemitambo uye chikepe Vatasvi.
Antwerp kuna De Panne Zvitima
KweBrussels kuna De Panne Zvitima
Imwe yakakurumbira zvinokwezva nokuti vana hadzina Disneyland. Hazvina kuwana nani pane rimwe Paris. Ndiyo inonyanya kufarirwa dingindira Park yose Europe nokuda kwechikonzero. Pane music nzvimbo shanu, uyewo Vatasvi zhinji uye zvinokwezva. Vamwe vavo vanosanganisira Parc Asterix, Pirates of Caribbean, Buzz Lightyear Laser Blast uye Chinhu Small World. Kushanyira Paris uye France nevana haisi yakakwana pasina Disneyland.
Paris kuna Disneyland Marne-la-Vallee Zvitima
KweBrussels kuna Disneyland Marne-La-Vallee Zvitima
Akagadzirira kuve chisingakanganwiki pazororo nemhuri yako yose? Shanyira zvimwe 5 yakanakisisa zvinokwezva nokuti vana Europe kubva yatakanyora pasi, uye uchava chinhu kwebhosvo. Ivai nechokwadi kuronga pazororo wako uye bhuku rako chitima matikiti nenguva!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-attractions-kids-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / of kuna / Ave kana / nayo uye mimwe mitauro.
#zvinokwezva #traveleurope europetrains europetravel eurotrip nezvitima Train Travel chitima rwendo travelbelgium travelengland travelfrance travelitaly travelnetherlands traveltips